"Kusasa kuhlakaniphile kunokuhlwa" - ngokuqinisekile ngamunye wethu ufundiswe lokhu kuhlakanipha kusukela ebuntwaneni ngabantu abadala. Kodwa kuze kube manje akubona wonke umuntu oqonda iqiniso eliyiqiniso leli sitatimende. Omunye uzimisele ukucabanga ukuthi ubuthongo luyihora elilahlekile lokuphila. Kodwa lokhu akude neze. Ingqondo yethu ayikwazi ukwenza ngaphandle kwalesi sici esiyingxenye yokuphila, okudingeka kakhulu ekubuyiselweni okuphelele kwenqubo yengqondo neminye imisebenzi ebalulekile.
Wonke umuntu ozihloniphayo kufanele aqonde impilo yakhe. Ukulala kwekhwalithi yisinyathelo sokuqala sokuphila ngendlela enempilo. Bambalwa bacabanga ukuthi balele kahle yini. Iyini iphupho elifanele - uma kufanele libe namandla ngokwanele ukuze ulale ngokwanele? Yisiphi isikhathi esihle sokulala emini? Ingabe ukulala kungaba nempilo kungakhathaliseki ukuthi usuku luni? Impendulo yale mibuzo neminye ongayithola kulesi sihloko. Sizolinga ukuthola ukuthi isikhathi esihle sokulala sizofika nini, futhi sizoqonda le myths evamile ngalokhu.
Ukulala, kungcono ukulala isikhathi eside?
Yile ndlela abantu abaningi bacabanga ngayo. Bacabanga ukuthi uma belele isikhathi eside, bangcono futhi bajabule kakhulu lapho bezwa khona emini. Kodwa-ke, odokotela baye bafakazela ukuthi lokhu akuyona intokwane kuphela. Ukulala isikhathi eside, awukwazi ukubangela umonakalo emzimbeni wakho, kodwa mayelana nesimo sezempilo esiphelele asikho embuzweni.
Umuntu omdala ojwayelekile akadingi amahora ayisishiyagalombili ngosuku ukuze alulame, abantu abadala bayodinga ngisho nangaphansi. Uma ulala isikhathi eside kunalokhu udinga, lo muntu uba luvila, u-inert, futhi ingqondo yakhe izobe ingavinjelwe. Ngaphezu kwalokho, uzofuna ukulala kaningi. Kulo mbuso, yikuphi i-yogis ebiza ngokuthi "isimo se-tamas", yonke isenzo silahlekile ukusebenza nokusebenza okusebenzayo. Yiqiniso, kungcono ukulala kunokungalali, kodwa kufanelekile ukukhetha incazelo yegolide.
Isikhathi esihle sokulala umzimba ozozikhethela wona?
Lena enye yezinganekwane ezivame kakhulu. Umuntu uhlelwe ukuze alale ebusuku. Ukulala phakathi nosuku kuyasiza ngaphandle kwamahora ambalwa, kodwa akusekho. Ukuze kutholakale ngokujwayelekile, ukusebenza kahle komzimba nesimo esihle sengqondo kunconywa ukuba ulale ebusuku.
Amakhulu emfundo afakazele ukuthi isikhathi esihle sokulala sivela ku-22 kuya ku-6 ekuseni. Vary ngalesi sikhathi kuye ngokuthi indlela yokuphila yamahora angu-1-2, kodwa akufanele kube khona umehluko omkhulu. Kukholelwa ukuthi kungcono ukulala 3-4 amahora emva kokushona kwelanga - lesi yisikhathi esihle sokulala ebusuku. Umzimba womuntu awuwona nje kuphela ukulala ubusuku bokulala kuphela, kepha ukudla ebusuku akupheli. Kulesi sixhumanisi, usengozini yokuthola izinkinga ngesisu, kepha okuningi mayelana nalokhu kamuva.
Ukuze ulale ubuthongo, udinga ukumboza ngengubo ngekhanda lakho kahle?
Ngakho abantu bayaphikisana, ngokuvamile bebhekene nezinkinga zokushaywa indiva nokuntuleka kwe-oxygen. Ukuze uthole ubuthongo obuhle, akunakulungiswa neze ukumboza ngekhanda. Uma ubanda - vele uthathe ingubo enkulu efudumeleyo, ungawuboya. Gqoka ngokucophelela imilenze yakho ne-torso, kodwa hhayi ikhanda lakho. Uma umboza ikhanda lakho, i-microclimate izokwenziwa ngaphakathi kwengubo, lapho olala khona ezophefumula ngomoya wakhe ovuselelwe. Ngenxa yokuntuleka kwe-oksijeni, awukwazi ukulala kahle, futhi mhlawumbe uzoba namaphupho osizi noma amaphupho amabi.
Ukukhanya okuvela efasiteleni akufanele kuwele embhedeni
Ngaphambi kokulala kuncono ukuvuselela igumbi. Ngisho nangenkathi ebandayo, ungavula ifasitela imizuzu embalwa bese usuka ekamelweni ngalesi sikhathi, ukuze ungabamba umkhuhlane. Kodwa ukulala ngefasitela evulekile akusikiswanga kahle, amathuba okugula akhula izikhathi ezingamashumi amabili.
Ngokuqondene nokubekwa kombhede, kungcono ukuyibeka phambi kwefasitela ukuze ukukhanya kwenyanga kube ngokukhululekile kungena ekamelweni lakho. Bathi isikhathi esihle sokulala siphezu kwenyanga egcwele. Kuyoba lula kuwe ukuba uvuke ngemisebe yokuqala yelanga. Kodwa uma uthola ilanga eliqondile ngesikhathi ulala - kungaba yingozi futhi kube yingozi empilweni. Ochwepheshe bakholelwa ukuthi ngezinye izikhathi lokhu kungabangela ekuthuthukiseni izicubu zomdlavuza, ikakhulukazi uma umzimba womuntu usuvele uzimisele kulokhu.
Ingabe isikhathi esihle kakhulu sokulala - ekuseni?
Abantu abaningi bavame ukucabanga ngale ndlela, kusukela iphupho ekuseni, nje ngesikhathi lapho iwashi lizokhala khona, yilo eliqine kakhulu. Kodwa lokhu akude neze. Sekuyisikhathi eside kufakazelwe ukuthi okuwusizo kakhulu kubhekwa amahora amaningana kuya ku-12 ebusuku. Kuze kube phakathi kwamabili ubuthongo obuwusizo kakhulu, ngakho isikhathi esihle sokulala komuntu singama-21-22 pm. Ngokusekelwe emiphumeleni yezinkulungwane zezifundo, abantu bathola ukulala okungcono, abalala kulokhu okwamanje. Futhi labo abalala ngemva kuka-00.00, bazizwa bekhathele usuku lonke.
Kusukela embusweni akufanele ushiye umzuzu
Sitsho kakade ukuthi ukulala isikhathi eside kungalungile engqondweni, kodwa nami ngingathanda ukuphawula iqiniso lokuthi uma uzwa ukucindezeleka okukhulu noma ukushaqeka okukhulu ngokomzwelo, kungcono ukulala ihora noma amabili isikhathi eside kunokujwayelekile.
Ukubuyela esitatimendeni esithi "ekuseni kuhlakaniphile kunobusuku," umuntu angabona ukuthi umsebenzi oyinhloko wobuthongo obunempilo ubuyiselwa emuva, futhi kuqala okokuqala isimo somqondo womuntu. Yingakho le nkulumo ivela, ngoba emva kokulala okuhle, umuntu uthatha ukuthatha izinqumo ezingenangqondo nokulinganisa, ukucabanga ngokuhlakanipha nokusebenza ngenhloso.
Ingabe bonke abantu badinga ukulala inombolo efanayo yamahora?
Okunye okungaqondakali kwalabo abaye bafunda ngandlela-thile ukuthi kuyinto evamile yokulala inani elithile lamahora, futhi lesi sibalo akufanele sishintshe. Yiqiniso, ukulala, umuntu udinga ukulala okungenani amahora angu-5 ngosuku. Isikhathi sonke sisekelwe endleleni yokuphila yomuntu, umsebenzi wakhe, umsebenzi womzimba ngisho nendawo ahlala kuyo.
Iqiniso elithakazelisayo - kucatshangwa ukuthi abaphathi kudingeka balele kakhulu kunabangaphansi. Ngakho, uNapoleon walala amahora amane ngosuku futhi wahlala ejabule. Futhi akayena kuphela isibonelo emlandweni wesintu, lapho abaphathi abakhulu, ababusi, amakhosi kanye nabanye abaholi abavelele belele kancane. Iqiniso liwukuthi kwakudingeka babuyisele kuphela amangqamuzana obuchopho nokulinganisela umsebenzi wengqondo ngesikhathi sokulala. Abantu abasebenza emzimbeni badinga ukubuyisela izicubu zomzimba, ngakho-ke badinga ukulala isikhathi eside ngokusebenza kahle nokusebenza komsebenzi wabo. Okufanayo kungashiwo ngabadlali, ngoba ukubuyisela usuku lwabo kubaluleke kakhulu njengesici sokuphumelela njengokuqeqeshwa.
Isikhathi esihle sokulala ebusuku silandela ukukhathala okuhle ngokomzimba.
Ukukhanya kwelanga noma ukukhanya kwenyanga akuthinti izinqubo emzimbeni?
Ngokushesha ngifuna ukuphikisa le mythano. Ngaphandle kwezizathu ezinhle zokulala ebusuku, esikushilo kakade, ngifuna ukuqaphela ukuthi ngalesi sikhathi umgogodla wakho uqondile futhi umthwalo ususwe, futhi inqubo ihamba ngokwemvelo.
Ebusuku, amandla okugcoba omhlaba akhula, ithonya lenyanga kukho konke uketshezi, kuhlanganise nomzimba womuntu. Ukukhanya kwenyanga kunomthelela omuhle esimweni sengqondo somuntu, uma ngalesi sikhathi ulele kakhulu. Abantu abanezinkinga zangemuva, isisu, inhliziyo, kunconywa kakhulu ukuba bagcine umbuso onempilo wosuku, okungukuthi, ukulala ebumnyameni nokungalali lapho ilanga likhanya. Lokhu kudala ukushintsha okuthile hhayi engqondweni kuphela, kodwa nasemzimbeni womuntu. Ukukhanya kwelanga kuvuselela izinqubo eziningi emzimbeni, kuvusa uhlelo lwe-cardiovascular and endocrine, luqala isisu, njll, futhi uma ulala ngalesi sikhathi, umzimba udala uhlobo lokuzikhukhumeza. Futhi, isikhathi esihle sokulala emini ebusuku.
Uma uvumelekile ukuba uphuze utshwala - njalo kuveza umphumela omubi emzimbeni, kungakhathaliseki ukuthi umthamo ungakanani. Ukubuyisa isimo sakho kukwazi ngokuphelele kuphela ukulala kwezwi. Ungakholelwa emthonjeni wekhofi, amabhange wamandla noma amaphilisi e-aspirin. Uma kwenzeka ukudakwa ngokweqile, kuyoba ngcono ukulala, kulokhu ngisho nokulala komuntu kuvunyelwe, kuzobe kungcono kunokuphoqeleka ukuba uhlale uphapheme.
Ukudla nokulala akuxhunyiwe?
Abantu abaningi abafundele bayazi ukuthi zonke izinqubo emzimbeni zihlobene ngandlela-thile. Kunconywa amahora angu-3-4 ngaphambi kokulala, futhi kufanele kube ukudla okulula okunomsoco, isibonelo, imifino, i-cottage shizi, inkukhu ephilile noma inhlanzi, izithelo, njll. Ukudla kakhulu ebusuku akukwaziswa. Lokhu kuchazwa kalula: ngesikhathi sokulala, umzimba wethu uphumule ngokuphelele futhi ubuyekeze, njengoba usuvele uwaqonda kusukela ezigabeni zangaphambilini. Futhi uma udla okuningi ngaphambi kokulala, umzimba wakho uyobe usuvele uthinteke okuthile okuhlukile - kuzogaya futhi kufane nokudla.
Uhlelo lokugaya ngeke luvumele lonke umzimba ukuba uphumule, luzokwenza lusebenze ubusuku bonke. Ngenxa yalokho, ngeke uthole ukulala ngokwanele futhi uzozizwa uchotshoziwe ngokuphelele, ngisho noma ulala isikhathi esanele. Abantu abaningi balala ngesisu esigcwele futhi ekuseni abaqondi isizathu sokunganakwa kwabo. Kodwa futhi ulambile ngokuphelele akudingekile ukuba uhlale phakathi nobusuku. Ngakho uzozizwa ungakhululekile nokukhathazeka njalo. Isisu sakho sidinga ukondliwa, futhi ngendlela efanayo ngeke ikuvumele ukuba ululame ngokugcwele.
Ekuphetheni, ngifuna ukunikeza iseluleko esilusizo. Kungcono ukulala uhamba noma ubeke izingubo ezincane, khona-ke amangqamuzana esikhumba azokwazi ukuphefumula. Ehlobo kungcono ukulala ngaphandle. Ungalali ngeso lengqondo futhi ungabukeli ama-night gear noma ama-movie, lapho uthola khona ukushaqeka okukhulu ngokomzwelo. Inhloko kufanele ibe mkhulu kunemilenze, futhi umbhede akufanele ube mnene kakhulu. Sithemba ukuthi uyaqonda isikhathi esingcono kakhulu sokulala, futhi ufunde okuthile okusha ngale nqubo ebaluleke kakhulu ekuphileni komuntu.
Kungani baphupha ushaka? Kungani dream mayelana amaphutha? Ukuhunyushwa kwezinye izincwadi iphupho